नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ‘मलाई यो अस्पतालको बेडको फाँसी भन्दा खुलामञ्चमा लगेर फाँसी देओस् सरकारले ।’ भिमसेन थापा भन्दा पनि बहादुर लाग्यो यि आमा !
‘मलाई यो अस्पतालको बेडको फाँसी भन्दा खुलामञ्चमा लगेर फाँसी देओस् सरकारले ।’ भिमसेन थापा भन्दा पनि बहादुर लाग्यो यि आमा !
नयाँ बर्षको उत्सब मनाउँदा हामीलाई फुर्सद कहाँ होला र ? यदी फुर्सद भए यि बहादुर नेपाली आमाको यो रोदन सुन्नुहोला एक पटक अबस्य ! यि आमा भिमसेन थापा भन्दा पनि बहादुर लाग्यो हामीलाई जो न्यायका लागि अदम्य साहस बोकेर लडीरहेकी छिन !
काठमाडौं । आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर अनशन बसेकी गाेरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले पानीसमेत पिउन छाडेकी छन् । विभिन्न आश देखाएर विभिन्न सरकारले उनको अनशन तोडाउने गरेका थिए । न्याय पाउने आश मारेकी गंगामायाले अब पानीसमेत नखाएर मृत्युवरण गर्ने बताइन् । ‘छोराको हत्या माओवादीले गर्‍यो, बुढा (नन्दप्रसाद अधिकारी)लाई सरकारले मार्‍यो, भएको एउटा छोरा पनि बेपत्ता छ’, गंगामायाले भनिन्, ‘मलाई यो अस्पतालको बेडको फाँसी
भन्दा खुलामञ्चमा लगेर फाँसी देओस् सरकारले ।’
Posted by www.Nepalmother.com at 2:15 PM